माओवादी र नयाँ शक्ति एउटै एजेण्डा सहित सडकमा, होला त एकता ? | mulkhabar.com
August 30, 2017 | 1:42 pm 524 Hits
नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्ति नेपाल का संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई एक समयमा एउटै शरीर झैं थिए । एउटै रंगको ड्रेस लगाउँथे, एउटै घरमा बस्थे, एउटै सोच राख्थे, एउटै धारणा व्यक्त गर्दथे । मित्र प्रति उत्तिकै माया गर्दथे र शत्रुप्रति त्यत्तिकै आक्रामक हुन्थे । तर समय बदलीयो । प्रचण्ड र बाबुराम आकाशका घाम र जुन जस्ता हुन पुगे । एउटाले अर्कालाई धोकेवाज र गद्धार सम्म भन्ने अवस्था आयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दिन करिब करिब दुईको सम्वन्ध विच्छेद भयो । र आजसम्म आउँदा सम्वन्ध विच्छेद भएको पनि २ वर्ष पुग्दैछ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा बाबुरामले आधा देश जलिरहेको बेला आफू खुसी बनाउन नसक्ने घोष्णा गर्दे संविधान निर्माणको जस त लिन सकेनन् त्यसमा खुशी मनाउन पनि तयार भएनन। जवकी उनकै संयोजकत्वमा संविधानको अन्तिम ड्राफ्ट कोरिएको थियो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति उनै थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गएको श्रावणमा सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितको बैठकबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिय निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लािग आन्दोलन र संघर्ष केन्द्रीत गर्ने निर्णय गराए । जुन नारा माओवादीले सस्पेण्ड राखेको थियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यसमा विरोध जनाएकाले संविधान निर्माणको लागि पेण्डींग गरिएको बताएको थियो । बाबुरामले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति नामको पार्टी बनाउँदै गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली आफ्नो बटम लाईन भएको भन्दै सम्वृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नारा तय गरेका थिए ।
अहिले बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्ति परित्याग गरी रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, देवेन्द्र पौडेल लगायत सयौं नेता कार्यकर्ता दिनहुँ माओवादीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्षमा आफूलाई अगाडि वढाउँदै गर्दा बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्तिले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको लागि धर्ना शुरु गरिरहेको छ । मंगलबार दिउँसो नयाँ शक्तिले माइतीघर मण्डलामा त्यसको लागि दवावमुलक धर्ना शुरु गरेको हो ।
यी एजेण्डाको हिसावले यी दुबै पार्टी एक ठाउँमा छन् । विकासको एजेण्डामा पनि एकै ठाउँमा छन् तर उनीहरुबीच एकताको संभावना के छ त ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम प्रोस्टेट को अप्रेशन गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिहेका बेला भक्तपुरस्थित अस्पतालमै पुगेर भेट गर्दै एक ठाउँमा आउन आग्रह गरेका थिए । देबेन्द्र पौडेल सहितका नेताहरुले माओवादीसँग एकता गर्दै गर्दा पनि प्रचण्डले बाबुराम देशको लागि काम लाग्ने मान्छे भन्न भ्याएका थिए ।
जनयुद्धमा सहभागि र त्यस यता एकतामा आएका सबै माओवादीका शुभचिन्तकहरुले प्रचण्ड बाबुराम, किरण र विप्लव एक ठाउँमा आउनुपर्ने मत सार्वजनीक संजाल मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । बाबबुरामले एकताबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् । उनीहरुबीच एकताको कुनै सम्भावना छ की छैन ?
माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेता भन्छन् एकता त्यति सजिलो र सहज छैन कार्यगत एकतासम्म भने हुन सक्छ । बाबुराम पक्षका एक नेता भन्छन् सबैले पार्टी विघटन गरी नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने हुन्छ एकता । पुरानै सोच र चिन्तन एवं ढर्राले एकता हुन सक्दैन । जनयुद्धका उपलव्धीलाई संस्थागत र संरक्षण गर्न पनि एकता हुनुपर्ने जनमत तिब्र छ ।
विश्लेषकहरु भन्छन् एकताको आवश्यकता प्रचण्ड र बाबबुराम दुबैलाई छ तर अझ वढि आवश्यकता बाबबुरामको पार्टीलाई देखिन्छ तर एकताको लागि बल बाबुरामले भन्दा प्रचण्डले नै गरिरहेका देखिन्छन् सम्भवत राष्ट्रपति चुनावसम्म दुबै एक ठाउँमा आउलान् ।